Greater Bay Area နှင့် အာဆီယံကြား ကုန်တင်ရထားဝန်ဆောင်မှု စတင် - Xinhua News Agency
ကွမ်ကျိုး၊ မေ ၂၆ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ကွမ်တုံ-ဟောင်ကောင်-မကာအို Greater Bay Area မှ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများသို့ ပထမဆုံး ကုန်တင်ရထားဝန်ဆောင်မှုလမ်းကြောင်းကို မေ ၂၅ ရက်တွင် စတင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၉၄,၄၀၀ တန်ဖိုးရှိသော ကုန်စည်များ တင်ဆောင်လာသည့် ကုန်တင်ရထားသည် တရုတ်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း ကွမ်တုံပြည်နယ် ကွမ်ကျိုးမြို့မှ မေ ၂၅ ရက်က ထွက်ခွာလာခဲ့သည်။ အဆိုပါ ရထားသည် ခရီးဆုံးနေရာဖြစ်သော ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ မြို့တော် ဟနွိုင်းသို့ ရောက်ရှိရန် အချိန် လေးရက်ခန့်ကြာမြင့်မည်ဖြစ်သည်။
ရထားသယ်ပူပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် Sinotrans Ltd. က နိုင်ငံတကာ ကုန်တင်ရထား ဝန်ဆောင်မှုသည် COVID-19 ကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်မှုအတွင်း ကမ္ဘာ့ကုန်စည်ထောက်ပံ့မှုလုပ်ငန်း အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန် အရေးပါသော ချန်နယ်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း အသိအမှတ်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တစ်နှစ်တည်းတွင်ပင် ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ကုန်တင်ရထားခရီးစဉ်ပေါင်း ၁,၅၈၀ ရှိခဲ့ပြီး ကုန်ပစ္စည်း TEU (twenty-foot equivalent units) ၁၅၇,၀၀၀ ရှိခဲ့ကြောင်း နှင့် ကုန်စည်ပမာဏ ၂၃ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက်ခဲ့ကြောင်း Sinotrans အရ သိရသည်။
ဒေသနှစ်ခုကြား ပထမဆုံး ကုန်တင်လမ်းကြောင်းအဖြစ် ယခုဝန်ဆောင်မှုအသစ်သည် ရပ်ဝန်းနှင့် ပိုးလမ်းမတစ်လျှောက်ရှိ နိုင်ငံနှင့် ဒေသများ အဆင့်မြင့်မြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု မြှင့်တင်သွားနိုင်မည်ဟု မျှော်မှန်းထားကြောင်း ကုမ္ပဏီက ဆိုသည်။ (Xinhua)
#GreaterBayArea, #ASEAN, #Freight_Train, #Service, #Xinhua, #Myanmar, #XinhuaMyanmar, #အာဆီယံ, #ကုန်တင်ရထား, #ဝန်ဆောင်မှု, #ဆင်ဟွာ
GUANGZHOU, May 25 (Xinhua) — The Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area launched its first freight-train route to ASEAN countries on Tuesday.
A freight train loaded with goods worth about 94,400 U.S. dollars departed from Guangzhou, capital of south China’s Guangdong Province, on Tuesday. The train will take about four days to reach its destination, the Vietnamese capital Hanoi.
Sinotrans Ltd., one of the route’s operators, regards the international freight-train service as an important channel to ensure the smooth operation of the global supply chain during the COVID-19 pandemic.
As the first freight route between the two regions, the new service is also expected to boost the high-quality development of countries and regions along the Belt and Road, the company said. ■
Photo provided by Sinotrans Ltd. showsafreight train departing from Guangzhou, capital of south China’s Guangdong Province, which is bound for Hanoi, the Vietnamese capital, on May 25, 2021. (Xinhua)